Fametrahana pylône: Nisavorovoro ny tao Andafiatsimon’ny Star
mercredi, 17 octobre 2018 19:37
Misedra olana amin’ny fametrahana ireny Pylône ireny hatrany ny orinasan-tserasera rehefa eto Antsirabe. Tsy latsaky ny 4 mantsy amin’izao fotoana ny toerana saika hanorenana ireny andrim-pifandraisana ireny no nosakanan’ny olona hatrany ny fametrahana izany.
Nisavorovoro indray mantsy ny tao amin’ny Fokontany Andafiatsimon’i Star androany alarobia maraina lasa satria nisy ny fikasan’ny orinasa nahazo ny tolo-barotra tamin’izany hametraka amin’ny tranon’olon-tsotra itony fitaovana fanapariahana azy itony.
Raha ny nambaran’ireo olona mantsy dia voalaza fa nisy Fokonolona miisa 72 nanaiky ny hametrahana ilay fitaovana kanefa tsy nampahafantarina akory ny manodidina izany.
Raikitra ny savorovoro ary dia niditra an-tsehatra haingana ny mpitandro filaminana vao nilamina izany.
Misy fanadihadiana mialoha ny fametrahana ireny pylône ireny ary misy ny fankatoavan’ny fiaraha-monina vao mamoaka fahazoan-dalana ny Ben’ny Tanàna saingy raha ny nambaran’ireo mponina dia ireo voakasika mihitsy no tsy nalaina ny heviny.
Vokany dia naato aloha ilay fanorenana ary nasaina nesorina ireo fitaovana saika hapetraka tao an-toerana.